Martech Zone ကြော်ငြာခေတ်၏ထိပ်ဆုံးဘလော့ ၅၀ တွင်ရှိသည် Martech Zone
Martech Zone Advertising Age ၏ထိပ်ဆုံးဘလော့ ၅၀ တွင်ပါ ၀ င်သည်
တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 13, 2007 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
သင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်မှုအတွက်အသိအမှတ်ပြုခံရတာအမြဲတမ်း ၀ မ်းသာပါတယ်။
Gannett သည်၎င်း၏ ဦး ခေါင်းကို Butt မှဖယ်ထုတ်ရန်လိုအပ်သည်
အီးမေးလ် ROI: အကြီးစားကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်အဘယ်သူမျှမ Brainer
13:2007 pm တွင်သြဂုတ်လ 5, 55
14:2007 pm တွင်သြဂုတ်လ 7, 04
ဂုဏ်ယူပါတယ်, Doug! ကောင်းစွာခံထိုက်! ကြောင်းစာရင်းအပေါ်အထင်ကြီးကုမ္ပဏီ။
သြဂုတ် 15, 2007 မှာ 10: 20 AM
ဂုဏ်ယူပါတယ်, Doug! ကောင်းသောအလုပ်တက်ထားပါ။